News - PET film – elu onwunwe mbukota ihe onwunwe na safty nkwa.
Site na mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị mmadụ na-etinye ahụike na ahụike ka mkpa. Nchekwa nri bụ ihe dị mkpa na-emetụta ahụ ike ndị mmadụ nke ndị na-emepụta nri mba ofesi na-ewere dị ka nnukwu ihe. Nkwakọ ngwaahịa nri, ọkachasị, ngwugwu ngwugwu a na-akpọtụrụ nri, na-emetụta ahụike nri, na-aga n'ihu na ahụike nke mmadụ. N'ihi ya enwere iwu siri ike na ngwugwu ihe oriri na mba ndị ọzọ maka njirimara teknụzụ na nchekwa ahụike. n'afọ ndị na-adịbeghị anya, China enwetakwala nchekwa nchekwa ahụike na usoro nke mmepụta nri. megide ndabere a, ọ dị oke mkpa iji ihe nkwakọ ngwaahịa nri yana nchekwa ahụike nri. dị ka isi mbukota materia, BOPET film nwere ndị na-esonụ kpọkwara:
Dị mma Njirimara, oge 3 na-emetụta ike ihe nkiri ndị ọzọ, na-agaghị ekwe omume na mpịachi.
Obi ike na mmanụ, abụba, olefine acid na ọtụtụ ihe mgbaze.
Ezi ntachi obi na oke okpomọkụ. enwere ike iji ya rụọ ọrụ ogologo oge na 120 ℃, na nkenke, na-arụ ọrụ na 150 ℃, ruo -70 ℃, obere mmetụta na arụmọrụ igwe.
GasLow gas na vepo permeability, ezigbo ihe mgbochi na mmiri, mmanụ na isi na-eme ka ndụ dị jụụ.
IghHigh doro anya nkiri, UV absorption, elu kenkowaputa film.
Ọ dịghị nsi, ọ dịghị isi, ezi heath nchekwa onwunwe, eji nri nkwakọ ozugbo.
Ndị na-eri ihe na-etinyekwu mkpa na nri ahụ ike chọrọ, esp. na adị ndụ, freshness na mgbochi nje Njirimara. ya mere ochicho na ezi oru PET ihe nkiri na-abawanye. nke a na - eme ka nri dị mma na afọ ndị na - adịbeghị anya n'ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa, e mesiri ike karị na ihe onwunwe, ihe a emeela mmepe nke PET.
Oxygen permeability bụ ihe dị mkpa n'ịhọrọ ihe nkwakọ ngwaahịa, maka obere akpa nri a kara akara, ndụ ndụ nke nri ahụ ruru ikuku permeability oxygen. Ọkachasị maka nkwakọ ngwaahịa agụụ na ihe mgbochi nkwakọ ngwaahịa.BOPET nwere ezigbo ihe mgbochi gas, n'okpuru ọnụ ụlọ, ndụ ndụ nke ihe ndozi Bopet jupụtara okpukpu abụọ Bopp. E wezụga nke ahụ, Alu.plated Bopet Film nwere arụmọrụ ka mma n'ihe gbasara mkpuchi na oxygen na mmiri akaebe karịa ihe nkiri Bopp. nke mmiri mmiri permeability nke Alu. Ihe nkiri Bopet ga-agbadata na 0.3 ～ 0.6 site na 40 ～ 45. Versus Bopp, 0.8 ～ 1.2 gbadata na 5 ～ 7. (g ／ mm2.24h.40 ℃ na Alu. ọkpụrụkpụ 60 ～ 70mm)
Ngwa dị ukwuu nke ihe nkiri Bopet na nkwakọ ngwaahịa na-eme ka ike dịkwuo ike, mbelata ngwugwu ngwongwo kwa otu ibu na mmetọ. oge ojiji na 120 ℃), enwere ike iji ya maka oven microwave. site na ngwa ngwa nke ndụ nke oge a, nri microwaved ga-enwe nnukwu ewu ewu n'etiti ndị mmadụ.
Ihe nkiri Bopet bụ ihe kachasị mma maka silikan dioxide agụụ plating.silicon dioxide ihe nkiri a na-eme site n'itinye ihe nkiri iko ahụ na ihe nkiri BOPET, ya bụ, ihe nkpuchi ihe eji emepụta iko. ya mere iji debe ihe mgbochi ihe mgbochi n'oge usoro nkwụnye ego na iji ya emechaa, a ghaghị ichebe oyi akwa iko ka ọ ghara imebi. ngwa na mmepe nke ihe mgbochi di elu BOPET- ihe nkiri -vacuum -deposite -silica -oxide -material mekwara ka nri na-ebunye indutry na uzo nke uzo di elu, ihe bara uru, ihe omume nke gburugburu ebe obibi. iko dị nro, ọ nwere otu ọrụ ahụ na karama iko na idebe ekpomeekpo ahụ, ọ gaghị emepụta isi ọ bụla mgbe ogologo oge nchekwa ma ọ bụ ọgwụgwọ dị elu ma nwee ọ enjoụ Al na ọrụ mgbochi. Ihe nkiri ahụ nwere otu nghọta mgbe a kwụsịrị ego ego.Soo nri nwere ike ịhụ nke ọma site na nkwakọ ngwaahịa nke na-akpali ọchịchọ nke ndị na-azụ ahịa.
Onweghi ihe mgbakwunye ogwu ndi ozo etinyere na ihe nkiri ihe nkiri BOPET, ma ọ bụkwa ihe eji emegharị emegharị nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ahụike, gburugburu ebe obibi nkwakọ ngwaahịa.